Taageerayaasha Liverpool oo wadnaha farta ku haya kahor kulanka Manchester United… (Maxaa qaldan?) – Gool FM
(Europe) 07 Okt 2019. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada gudaha dalka England kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay halis ugu jirtaa inay lumiso adeega xiddigeeda reer Masar ee Maxamed Saalax, kulanka ay Manchester United ku wada ciyaari doonaan Isbuuca 9-aad ee horyaalka Premier League, kaasoo la ciyaari doono marka la soo gabagabeeyo kulanka heerka caalami.
Maxamed Saalax ayaa dhaawac soo gaaray intii lagu gudi jiray kulankii horyaalka Premier League ay Sabtidii 2-1 kaga adkaadeen Leicester City, waxaana lagu bedelay daqiiqadii 90-aad, xiddiga reer England ee Adam Lallana, kaddib markii uu awoodi waayay inuu ciyaarta sii wato, sababa la xiriira dhaawaca soo gaaray.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Bel Report”, Maxamed Saalax ayaa maray baaritaano caafimaad saakay oo Isniin ah, waxaana lagu ogaadey inuu dhaawac ka qabo dhanka canqowga, iyadoo aan wali si sax ah loo ogaanin mudada uu garoomada ka maqnaan doono.
Xiddiga reer Masar ayaa ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda uu leyliyo tababare Jurgen Klopp, isagoo dhaliyay 4 gool isla markaana sameeyay 3 caawinaad kale, 8 kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Maxamed Saalax ayaa mari doona tijaabooyin caafimaad oo dheeri ah xilli ciyaareedka soo socda si loo ogaado inuu ciyaari doono kulanka horyaalka Premier League ay Manchester United ku booqan doonaan garoonka Old Trafford.